Online Burma Library > Main Library > Politics and Government > Burma/Myanmar's Legislature > Parliament > Pyidaungsu Hluttaw (Union Parliament): - legislation and other proceedings > Pyidaungsu Hluttaw: Laws and bylaws/rules/regulations proposed (bills) and/or adopted in 2015
Home > Main Library > Politics and Government > Burma/Myanmar's Legislature > Parliament > Pyidaungsu Hluttaw (Union Parliament): - legislation and other proceedings > Pyidaungsu Hluttaw: Laws and bylaws/rules/regulations proposed (bills) and/or adopted in 2015
Title: Pyidaungsu Hluttaw Act No. 74/2015 - ဘက်စုံပို့ဆောင်ရေးဥပဒေပကိုပြင်သည့်ဥပဒေ
Title: Law Amending the Myanmar Evidence Act - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 73/2015 - သက်သေခံအက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
Title: Law Amending the Myanmar Mining Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 72/2015 - မြန်မာ့သတ္တုတွင်းပြင်ဆင်ဥပဒေ
Title: Law Amending the Foreign Investment Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 67/2015 (Burmese မြန်မာဘာသာ)
Title: Law Relating to 2015-2016 Pyidaungsu Budget - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 65/2015 (Burmese မြန်မာဘာသာ)
Description/subject: Provisional English title. ၂၀၁၅-၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏နောက်ထပ် ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ
Title: Second Amendment of the Law Relating to the Pyidaungsu Hluttaw - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 63/2015 (Burmese မြန်မာဘာသာ)
Description/subject: Provisional English title. ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
Title: Law Amending the Fast Highways Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 60/2015 - အမြန်လမ်းမကြီးများပြင်ဆင်ဥပဒေ
Title: Second Amendment of the Highways Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 62/2015 - လမ်းမကြီးများဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်ဥပဒေ
Title: Second Amendment of the Law on the Utilization of Roads and Bridges - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 61/2015 - လမ်းတံတားအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ ဒု-အကြိမ်ပြင်ဆင်ဥပဒေ
Title: Law Amending the Law Concerning Blood and Blood Related Materials Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 57/2015 - သွေးဆိုင်ရာပြင်ဆင်ဥပဒေ
Title: Law Repealing the Retirement Act - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 59/2015 - ပင်စင်အက်ဥပဒေရုတ်သိမ်းသည့်ဥပဒေ
Title: Organ Donation Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 58/2015 - ကိုယ်အင်္ဂါလှူဒါန်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ
Title: Automobile Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 55/2015 - မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေ ၂၀၁၅
Title: Law Amending the Law Concerning the Pyithu Hluttaw Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 56/2015 (Burmese မြန်မာဘာသာ)
Description/subject: Provisional English title. ၂၀၁၂၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
Title: Law on the Preservation and Protection of Ancient Buildings - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 51/2015 - ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ
Title: Law Concerning Religious Conversion - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 48/2015 - ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ
Title: Law Concerning the election of the President and Vice-President - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 49/2015 (Burmese မြန်မာဘာသာ)
Description/subject: Provisional English title. နိုင်ငံတော်သမ္မတ နှင့်ဒုသမ္မတများ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
Title: Myanmar Red Cross Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 52/2015 - ကြက်ခြေနီအသင်းဥပဒေ
Title: Law Amending the Law on the Organization of Union Government Positions - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 47/2015 (Burmese (မြန်မာဘာသာ)
Title: Second Amendment of the Union Law on Legal Proceedings - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 46/2015 - ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးဥပဒေ တတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်
Title: Law Protecting Ancient Objects - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 43/2015 - ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကာကွယ်ထိမ်းသိမ်းရေးဥပဒေ
Title: Second Amendment of the Law on the Development of Border Areas and National Races - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 44/2015 (Burmese (မြန်မာဘာသာ)
Title: The Boiler Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 39/2015 - ဘွိုင်လာဥပဒေ
Title: Law concerning dams higher than 15 metres (Pyidaungsu Hluttaw Law No. 41/2015) - မြန်မာနိုင်ငံတမံကြီးများဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီဥပဒေ
Title: Law Relating to National Budget Use - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 42/2015 (Burmese မြန်မာဘာသာ)
Description/subject: Provisional English title. ပြည်ထောင်စု၏ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံး ရေးဆွဲတင်ပြခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ
Title: Law Amending the Pyidaungsu Election Commission Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 40/2015 (Burmese မြန်မာဘာသာ)
Description/subject: Provisional English title. ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
Title: Law Amending the 2012 Amyotha Hluttaw Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 35/2015 (Burmese မြန်မာဘာသာ)
Description/subject: Provisional English title. ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
Title: Law Amending the Lower Myanmar Town and Village Land Act - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 37/2015 (Burmese (မြန်မာဘာသာ)
Title: Law Amending the National Education Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 38/2015 - ၂၀၁၅ခုနှစ် အမျိုးသားပညာရေး ပြင်ဆင်ဥပဒေ
Description/subject: Provisional English title. ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်းအတည်ပြုရေး ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
Title: 2nd Amendment of the Pyithu Hluttaw Election Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 32/2015 (Burmese မြန်မာဘာသာ)
Description/subject: Provisional English title. တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
Title: 2nd Amendment of the Regional and State Hluttaw Election Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 34/2015 (Burmese မြန်မာဘာသာ)
Description/subject: Provisional English title. တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
Title: 2nd Amendment of the the Amyotha Hluttaw Election Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 33/2015 (Burmese မြန်မာဘာသာ)
Description/subject: Provisional English title. အမျိုးသားလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
Title: Law on the Myanmar Council on Accounting - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 31/2015 (Burmese (မြန်မာဘာသာ)
Title: Law on the Rights of Persons with Disabilities - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 30/2015 - မသန်စွမ်းသူများ၏အခွင့်ရေးဥပဒေ
Title: Law, rules and forms for the registration of associations - Burmese (မြန်မာဘာသာ)
Title: Rules Relating to the Registration of Associations (Burmese, မန်မာဘာသာ)
Description/subject:ွှThe Government of the Republic of the Union of Myanmar Ministry of Home Affairs (Notification No. 705 / 2015 ) The 4th Waning Day of Nayon, 1377 M.E. (5th June, 2015)
Title: Law regarding Inland Water Transport Vessels - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 29/2015 - ပြည်တွင်းရေကြောင်းသွားရေယာဉ်ဥပဒေ ၂၀၁၅
Title: Law regarding Population Control and Health - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 28/2015 - လူဦးရေထိမ်းညှိခြင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဥပဒေ
Title: Myanmar Nursing and Birthing Council Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 27/2015 - သူနာပြုနှင့်သားဖွားကောင်စီဥပဒေ
Title: 2015 National Budget Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 20/2015 - ၂၀၁၅ ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ
Title: 2015-2016 national budget law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 19/2015 - ၂၀၁၅-၁၆ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေ
Title: Highways Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 24/2015 - အမြန်လမ်းမကြီးများဥပဒေ ၂၀၁၅
Title: Law on the commission for translating laws- Pyidaungsu Hluttaw Law No. 25/2015 - ဥပဒေဘာသာပြန်ကော်မရှင်ဥပဒေ
Title: Law on the development of small and medium businesses (Pyidaungsu Hluttaw Law No. 23/2015) - အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ေ
Title: Law repealing the 1993 towns and cities development organization law (Pyidaungsu Hluttaw Law No. 22/2015) - စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များ ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့်ဥပဒေ
Description/subject: Provisional English title. ၁၉၉၃ခုနှစ်၊ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များအက်ဥပဒေကိုရုပ်သိမ်းသည့်ဥပဒေ
Title: Myanmar Coastal Authority Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 21/2015 - မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်ဥပဒေ ၂၀၁၅
Title: Myanmar medical council law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 26/2015 - မြန်မာနိုင်ငံဆေးကောင်စီဥပဒေ
Title: Pyidaungsu Hluttaw Act No. 15/2015 - မြေသြဇာဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
Title: Law Amending the 1954 National Titles Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 12/2015 (Burmese (မြန်မာဘာသာ)
Title: Law related to fire fighters - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 11/2015 (Burmese (မြန်မာဘာသာ)
Title: Coastal and maritime transportation law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 10/2015 - ကမ်းရိုးတန်းနှင့်ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ခွင့်ဥပဒေ ၂၀၁၅
Title: Competition Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 9/2015 (Burmese (မြန်မာဘာသာ)
Title: Law protecting ethnic rights - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 8/2015 (Burmese (မြန်မာဘာသာ)
Title: Law Amending the Seed Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 5/2015 - မျိုးစေ့ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
Description/subject: Provisional English title. ၁၉၆၁ ပြစ်မှုကျူးလွန်တတ်သူများ ခြေချုပ်နှင့်ခံဝန်အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
Title: Law Repealing the Farm Produce Market Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 7/2015 - လယ်ယာထွက်ကုန်ဈေးကွက်များအက်ဥပဒေကိုရုတ်သိမ်းသည့်ဥပဒေ
Title: Law Amending the Law Regarding Civilian and Military Diplomats - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 3/2015 (Burmese (မြန်မာဘာသာ)
Title: Law Amending the United Nations Organization Act- Pyidaungsu Hluttaw Law No. 4/2015 (Burmese (မြန်မာဘာသာ)
Description/subject: Provisional English title... A Pyithu Hluttaw website link is used as an alternate link to this law but it does not always work. ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်းအတည်ပြုရေး ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲဥပဒေ
Title: Bill Amending Law Relating to Managing of Budget for Foreign Use - နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုပြင်ဆင်ဥပဒေကြမ်း
Title: Myanmar Companies Bill (Burmese, မန်မာဘာသာ)
Title: Science, Technology and Invention Bill - သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဥပဒေကြမ်း